ကဗျာပြခန်း အမှတ်လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကဗျာပြခန်း အမှတ်လေး
Posted by Mr. MarGa on Jul 1, 2012 in Arts & Humanities, Best Web Awards, Creative Writing, Drama, Essays.., Myanmar Gazette, Poetry | Comments Off on ကဗျာပြခန်း အမှတ်လေး
တစ်ခန်းထက်တစ်ခန်း ကဗျာတွေကလဲ ပိုလို့ ပိုလို့ ကောင်းလာတယ်လို့တောင် ပြောရမလား မသိ
ဒီ ပြခန်းမှာ ကဗျာ ဆယ့်ခြောက်ပုဒ် ထည့်သွင်း ပြသထားပါတယ်ဗျို့
ဒီအပတ် ပြခန်းပို့စ် တင်တဲ့ အမွန်က ပေးထားတဲ့ ကဗျာဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ရှိသေးတယ်
ရှေ့ပို့စ်မှာ နေရာမလောက်လို့ ဒီမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ထုတ် “တော်လှန်ကဗျာ” စာအုပ်မှာ ပါတဲ့ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ ရဲ့ အမှာစာပါ ခင်ဗျ။
ခေတ်သစ်ကဗျာဟု ဆိုသူက ဆိုကြသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ကဗျာဟု ဝေဘန်ရေးဆရာတချို့က နာမည်ပေးကြသည်။ ယနေ့ လက်ရှိ ကဗျာရေးနေကြသူများရော၊ စာဖတ်ပရိသတ်ကပါ ယင်းဝေါဟာရသစ်ကို ပြဿနာမလုပ်ကြ။ ယင်းဝေါဟာရသစ်ကို ဘယ်ကဗျာဆရာကမှ အငြင်းပွါးမနေကြတော့။ သူတို့အားလုံးရင်ထဲက ကဗျာသစ်ပါတကားဟု ခံစားကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဝေါဟာရတို့သည် သူ့အဓိပ္ပာယ်ကို သူ ဖော်နေကြပေသည်။ နှစ်ကာလကြာသော လူက လက်ခံပြီး စာလုံးသည် တည်ရှိသွားလေပြီ။
ခေတ်သစ်ဟု ပြောလိုက်သဖြင့် ခေတ်ဟောင်းနှင့် ကွဲပြားကြောင်း ခြားနားခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ဟု ခေါ်လိုက်သဖြင့် ပြီးခဲ့သော ခေတ်နှင့် မတူကြောင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ စာပေသစ်ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်သဖြင့် စာပေဟောင်းမှ လမ်းခွဲကြောင်း ကျေညာလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့သော အချင်းအရာများသည် ရှောင်တခင် အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလော။ မဟုတ်ပေ။
ယနေ့ခေတ်တွင် ရေးသဖြင့် ခေတ်ပေါ်ဟု ခေါ်ခြင်းလော။ မဟုတ်ပေ။ ခေတ်သစ်ဟု အမည်ထုတ်ခြင်းလည်း မဟုတ်ပေ။ ကဗျာသစ်ဟု သိဒ္ဓိတင်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ရှေးက ကုန်းဘောင်နေမင်း၊ ဘုန်းရောင်ဝေရှင်းဟု ရေးသည်ကို ခေတ်ဟောင်းတေးဟု သမုတ်ပြီး ယနေ့ခေတ်သစ်၌ အုပ်စိုးသူ အာဏာရှင်များကို ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်ဟု ရေးဖွဲ့ပါက ကဗျာသစ်ဖြစ်မည် ထင်သလော။
ရှေးကဗျာသည် စိန်ကြာညောင်လွ၊ ရောင်ကြိုးကြွမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူသည် ပေထုပ်များဖြင့် မွမ်းသော ကျောင်းသင်္ခမ်း သို့မဟုတ် စောင်းခတ်သံ စည်ဝေသော နန်းယင်ပြင်မှ ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ စာပေကျမ်းဂန်၌ နှံစပ်သော ပညာရှိ ကဝိများ၏ အရာဟုလည်း ကဗျာ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ခဲ့ကြသည်။ သားမြီးယပ်တောင်ကို ခတ်ရင်း စောင်းသံဖြင့်သီသော လင်္ကာကို သာယာချိုမြိန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုခေတ်က ပညာတတ်၊ စာတတ် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကျောင်းပရဝုဏ်နှင့် နန်းယင်ပြင်၌သာ ရှိသည်။
ဒေါင်းတံဆိပ် နေရာတွင် သရဖူနှင့် ခြင်္သေ့တံဆိပ် ရောက်လာခဲ့သည်။ ကုန်ဘောင်နေမင်းမှ ဂျော့ဘုရင် နေတနှုန်း ပေါ်လာပြန်သည်။ ယင်းတို့သည် ထူးခြားသော အချင်းအရာလော။ ခေတ်ပေါ် ကဗျာပေလော။
စသော လူမျိုးပေါင်းစုံတေးသည် ပဲရစ်မှ ပီကင်းအထိ လွှမ်းလာတော့သည်။ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတို့၏ ရွှံ့ပေသော ဘိနပ်စုတ်တို့သည် နန်းတော်များ၏ ကတ္တီပါကော်ဇောပေါ်သို့ နင်းတက်ကာ တူတံဇင်အလံနီကို လွှင့်ထူလိုက်ကြသည်။ ကဗျာဆရာတို့က ရွှံ့ပေသော ကော်ဇောနှင်းဆီကွက်ကို ဖွဲ့နွဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆီ၌လည်း ပင်နီယောထမီဝတ်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ရေးကို တောင်းဆိုကြပေပြီ။ ၁၉၃၀ ၌ကား လယ်သမားသူပုန်ကို မဟာမှိုင်းက ဂဠုံသရဏံ ဂစ္ဆာမိကြပေတော့ ဟု အလေးပြုလိုက်သည်။ မင်းဧကရာဇ်ခေတ်က သူပုန်ဆိုသည်မှာ ငါ့နန်းလုမဲ့သူဘဲဟု ဖိုကျင်ထိုး၍ သတ်စေဟု ပြန်တမ်းတော် ထုတ်ဆင့်ခဲ့သည်။ မဟာမှိုင်းက ပြည်သူ့ဘက်မှ ရပ်ကာ နယ်ချဲ့သမားအားတိုက်သူကို ကျောက်တိုင် စိုက်ပေးခဲ့သည်။
ယင်းကျောက်တိုင်ကား ခေတ်ပေါ်ကဗျာ၏ မှတ်တိုင်ပင်။
ကျန်တဲ့ အပိုင်းကို နောက်ပြခန်းမှာ ဆက်ပါမယ်ဗျို့…………
ကဗျာများကို စာသားသီးသန့် ဖတ်ချင်သူတွေအတွက် ဒီလင့်ကို နှိပ်ပါဗျို့
အဆင့်မြင့် တပ်ဆင် ပြင်ဆင်ခြင်း
လောဘ၊ နောက်က ဒေါသ၊ ထပ်ပါလာတာက မောဟ
အလွမ်း မတတ်တဲ့ သူ
အလွမ်း ဘက်လိုက်မိတဲ့ ဆုံမှတ်
ညှီဟောက်သိုးပြီး၊ လူရိုးတောင်လို ပုံနေတာ။
သွေးပွက်ပွက်နှင့်၊ မှောက်ရက်လဲပြီး သေနေတာ။
အစပြုသည့်၊ လူမှုရေးရဲ့ စစ်မျက်နှာ။
စစ်မျက်နှာတွေ၊ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေ၏။
“ကဗျာလူငယ် ရေးဘော်များ”။ ။
သံသေတ္တာ နှစ်လုံးရယ် ကျွန်းတစ်ကိုပေါင်းတော့
မွေးနေ့အမှာ ၊ အလှူရယ် ခပ်တင်းတင်း
ဒီမှာ ငါ ဥစ္စာစွဲစေ
အစိမ်းလန်းဆုံး ပန်းခင်း… ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာရှိတယ်….
အကြည်လင်ဆုံး စမ်းလေး…… ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာစီးတယ်….
နေမဝင်တဲ့…. ကမ္ဘာ…. အဲဒါ ကျွန်တော့်ကမ္ဘာ……
ကြည်နူးစရာ ပုံပြင်တွေ… ရင်ဘတ်အပြည့် ကျွန်တော်သိမ်းထားတယ်……
ကျွန်တော့် ကမ္ဘာမှာ သူရှိသလို….
တွယ်ရာမဲ့ လူသားတွေရဲ့ ဘဝကို
စိတ်ကူးရွက်လွှင့်ကြည့်စမ်းပါ အစ္စဘယ်လာ နီလာ
ပညာတတ် ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချော တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့်
လောကကို အလှမဆင်ရင် ဘာဆိုဘာမှမလှဘူး
အလုံး အရပ် လှတာလေးနဲ့
သူတကာထက် မြတ်ချင်သူ အစ္စဘယ်လာ နီလာ
သင်္ခါရ သဘောတရားမှာ အရာအားလုံး အရွေ့တရားနဲ့
မင်းအနား ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာ အလှမက်သူတွေ
မင်းကို လွှမ်းမိုးထားခဲ့ပြီ အစ္စဘယ်လာ နီလာ
လွတ်လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုတွေဆီ ဆွဲခေါ်ဖုိ့
တကယ့်လှတာ အစ္စဘယ်လာ နီလာ
ငါ လျှောက် နေ တဲ့ လမ်း နဲ့ မင်း သွား နေ တာ
ပြိုင် မျဉ်း နှစ် ကြောင်း
တို့ ဘယ် တော့ မှ မ ဆုံ နိုင် ဘူး။ ။
ရင်ခုန်သံကြီးကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ နမ်းရှိုက်ရင်း
ဆာလောင်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ လျှာတစ်ခြမ်းကို နှစ်သိမ့်တတ်ပေမယ့်…
သား…အများကြီးကို ရှာဖွေခဲ့ပါတယ် မေမေ…
စာကြည့်တိုက် ပြတိုက်..အဟောင်းဆိုင်နဲ့ 
သားရခဲ့တာဟာ အဝေးဆုံးတစ်နေရာက ညနဲ့ မတူတဲ့ ညတွေရယ်….
ဓူဝံကြယ်ပေါ်က မချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံရယ်…
အသက်နဲ့ ရင်းပြီးဝယ်ခဲ့ရတဲ့ တန်ဖိုးနည်း အတွေ့ကြုံတွေရယ်…
ပိန်ပါးပါး ရှည်မျောမျောလေးနဲ့ မှောင်ပျပျတစ်နေရာဟာ
သားရဲ့ စတင်ရာပါလားလို့ ပြန်သိလိုက်ရတဲ့ အသိလေးတစ်ခုရယ်ပါ…။
ကျနော့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာက ကမ္ဘာပြိုတောင် သူအိုမှာမဟုတ်ဘူးလေ..
သားရဲ့အသက်ဟာ လေပြေတစ်ချက် ချောင်းတဟပ်နဲ့တင် လွင့်ထွက်သွားနိုင်ပေမဲ့
လေတိုက်လို့ ကြွေကျမယ့် သရက်သီးလေးတွေကို လိုက်ကောက်စားချင်သေးတယ်…
ခြေမတစ်ချောင်းနဲ့ လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းသာ နေရာရတဲ့ ဘက်စ်ကားကိုလဲ တိုးစီးချင်သေးတယ်…
ဘေးအိမ်ကတောင်းလို့ ရတဲ့ ငါးပိရည်အဖြူထည် ခပ်ကြဲကြဲလေးနဲ
့ခြံတစ်ပတ်လိုက်ခူးလို့ ရလာမယ့် အရွက်စုံတို့ စရာလေးတွေကိုလဲ မြိန်ယှက်ယှက်စားချင်သေးတယ်…
ငါးခြောက်ထောင်းနဲ့ ပြာဟင်းချိုကိုလဲ သောက်ချင်သေးတယ်မေမေ…
ဒီလိုပါပဲ မေမေ…အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေက မေမေ့ရင်ခွင်က ထွက်ပြီး
တကယ်တော့လဲ သုခုမဆိုတာက သြဠာရိကထက်ကို ကြမ်းလွန်းခဲ့ပါတယ်…
ကဗျာတွေနဲ့ သာ အလွမ်းကျောက်စိုင်တွေကို အရည်ဖျော်နေရတာပါမေမေ..။
အသစ်တို့ဖြည့်တင်းရင်း အဟောင်းတို့ စွန့်ဖယ်ရင်းနဲ့
တွေးနေ ငေးနေရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့မှာလည်းစိုးရသေး ……….။
အပ်ဂရိပ်ဒ် (Upgrade) လုပ်လို့ရရင် ကောင်းမယ်…။
ကျမက ညရဲ့ ညဆန်မှုကို နှစ်ခြိုက်သူ…။
ပိုးစုန်းကြူးတစ်ကောင်ရဲ့ ဓါတ်ပြုမှုကို တောက်ခေါက်ချင်သူ…။
အလင်းရောင်ရဲ့ အလိုမတူနယ်ချဲ့ခြင်းကို ခံရလေ့ရှိတယ်…။
အနာဂတ်တွေဟာလည်း ညပီသဖို့ ဝေဝါးလွန်းတယ်…။
ပြုံးအမြင်နဲ့ မောင် နေပါ့မယ်
ရဲရင့်မှုနဲ့ မိုက်မဲမှုကြား ခြားထားတဲ့အလွှာပါး
ငါနားမလည်တဲ့ ငါ့အတွက် လက်ခုပ်သံတွေကြား
ငါ……….. ကြမ္မာကြိုးတန်းပေါ်က လမ်းလျှောက်သူပေါ့။
လိုအပ်ခြင်းတွေအတွက် မြတ်နိုးရာတွေကို စတေးရင်း
ကမ္ဘာကြီး ရွာဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ်
ရွာကြီး ကမ္ဘာဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ်
ငါက ငါဖြစ်ဖို့ပဲ ငါ့အတွက် အရေးကြီးတယ်။
ထံသို့ရော် နွမ်းရိလှလေး…။ ။
သြော်…. အမေနဲ့ ရွာကိုလွမ်းတယ်….
လောဘ ၊ဒေါသ ၊မောဟ
မနက်ဆို အသက် တစ်ရက်တိုး
အတိတ်မှာ မနိုးသောအိပ်စက်ခြင်းများနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ…….။
အဆိုးတွေကြားထဲ အကောင်းတွေရှာရတာ အသက်ရှူမှားမတတ်
ခြေဖ၀ါးကြွတာနဲ့ အစားဝင်မယ့်သူက အစီအရီ
ခဏတာ လူဖြစ်တဲ့ တို့ဘ၀
ပြန် ရင် ဘာ တွေ ယူ လာ ကြ မှာလဲ…..။
မိုးရွာရန်ရာနှုန်း ၉၀ရှိတယ်လို့ မိုးလေဝသ သတင်းမှာကြားလိုက်တယ်
ပတ်ဝန်းကျင်က အလွမ်းဘက်လိုက်တော့လည်း …. မှောင်လိုက်တာကွယ်
မိုးရေထဲမှာ ရပ်နေရတာ ကျွန်မ နှစ်သက်တယ် ဆိုပြေ
ကျွန်မျက်ရည်တွေကို ရှင် မမြင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့
မိုးတွေကို ကျွန်မ ချစ်လိုက်တာ
ထီးမပါလို့ထင့် ဖိုင်လေးနဲ့ခေါင်းကိုမိုးပြီး ပြေးရှာတယ်
တကယ်တော့ ကျွန်မက လောကကို ကျွန်မအတွက်ပဲ ဘောင်ခတ်ကြည့်ခဲ့မိတာ
အဲဒီဘောင်လေးထဲမှာ ဘာတွေရှိမယ်ထင်သလဲ ဟင်
ကျွန်မဖျော်တိုက်မယ့်ကော်ဖီ ရှင်သောက်ချင်အုံးမလား ဖြေပါ
ခံစားမှုထဲတော့ (နည်းနည်း) ပျော်ဝင်စေချင်တယ်..
ခုတော့ နှင်းဆီ သေလေပြီ။
ဖတ်ပြီးရင် ကွန်မန့် ပေးခဲ့ ကြပါဗျိုးးးးးးးးးးးးးး